Muqdisho: Magaalo dadkeeda oo baahan Shaahiga lagu cabo $4! | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho: Magaalo dadkeeda oo baahan Shaahiga lagu cabo $4!
Dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa faan mooda qarashaadka badan ee ay ku bixinayaan maqaayadaha iyo Hoteelada, waa warbixinta Wariyaha Keydmedia Online ee Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho, ayaa waayadan dambe waxaa ka jiray dhaqano aad ay dadku ula yaabeen, iyadoo magaaladana ay kusoo bateen goobaha laga cunteeyo ee furteen dad ka yimid qurbaha.
Maqaayadaha loo naqsadeeyay sida casriga ah iyo hoteellada cusub ee magaalada laga furay ayaa la yimid dhaqan aad u xun, waliba u muuqdo mid lagu cayrteenayo shacabka Soomaaliyeed.
Iyadoo caasimadda ay ku sugan yihiin kumaaan qof oo barakacayaal ah, kumanaan kale oo dan yar ah iyo sidoo kale dad laga yaabo in maalintii aysan mar-mar dabka shidan, ayaa dadka qaar ee magaalada ku nool waxay awoodaan in Koob shaahi ah kaliya ku cabaan Afar doolar.
Tusaale, maqaayadaha qaar ee magaalada lagu soo kordhiyey waxa ay gadaan Halkii koob ee Shaah ah 4 doolar, cabitaankana sidoo kale, waa lacag ka badan Maqayadaha ugu qaalisan ee Magaalada London ee dalka Ingriiska oo koobkii maraayo 2.5 ilaa 3 doolar.
Raashiinka dhankiisa markii aynu eegno, waxay haafkii (bahd) hilib ah ay iibiyaan ugu yaraan $15.
Maqaayadaha caadiga ah ayaa koobkii Shaaha ah waxaa la iibiyaa lacagta ugu badan 5-kun oo shilin Soomaali ah, waana marka labo loo qeybiyo Nus doolar.
Sidoo kale, haafkii hilibka ayaa ugu badnaan waxaa la gadaa $3, balse dhaqamadan cusub oo laga soo inguuriyey dalalka shisheeye ayaa keentay in masaakiintii oo baahan in dushooda qarashkaas lagu bixiyo.
Tusaale, $2 waxa ay maalintaasi dabka u shiddaa qoys laga yaabay iney baahi habeenkaas ku seexan lahaayeen, iyadoo dadka lacagahan bixiya aanay ku fekerin dadka ka hooseeya.
Sidoo kale, waxaa jirta dhallinyaro shaqeysta walibana mushaarkoodu aanu badneyn, balse faan iyo halagaa sheego dartiis ku bixiya lacagahan.
Adduunka waxa lacagaha iyo sida wax loo iibiyo jaangooya dowlahada, balse Soomaaliya ayaan haysan dowlad u dhimrisa dadka danta yar.
Shacabka qaar oo aan arrintaan kala sheekeysannay waxay inoo sheegeen in maqaayadaha sidan qaaliga ah wax u iibiya ay gacan saar la leeyihiin DFS, qaarkoodna waxaaba leh wasiiro iyo xildhibaanno.
Ku darso, iyadoo qarashka sidan u badan laga qaadayo shacabka, ayaan hadana laga bixin canshuurtii ku waajibtay.